China china kiln - matani zana / zuva kugadzirwa maitiro -EPC chirongwa fekitori uye vagadziri | Judha
Lime ndiyo yakakosha uye yakakosha yekubatsira simbi yekugadzira, calcium kugadzirwa kwecarbide, kugadzirwa kwekuratidzira, kugadzirwa kwealumumina. Kunyanya munguva itsva, tekinoroji nyowani, zvigadzirwa zvitsva zvinoramba zvichikura zvigadzirwa zvecalcium zvakanyanya uye zvakanyanya kushandiswa ...
I. Kukosha Kwekuvandudza Nyowani Yemazuva Ano Lime Kiln Technology
Lime ndiyo yakakosha uye yakakosha yekubatsira simbi yekugadzira simbi, calcium kugadzirwa kwecarbide, kugadzirwa kwesimba, kugadzirwa kwealumumina. Kunyanya munguva itsva, tekinoroji nyowani, zvigadzirwa zvitsva zvinoramba zvichikura zvigadzirwa zvecalcium zvakanyanya uye zvakanyanya kushandiswa zvakanyanya. Kudzidzira kwakaratidza kuti yemazuva ano lime kiln tekinoroji zvirokwazvo iri yechokwadi uye nzira pfupi nzira inobatsira yakajeka nzvimbo yesimbi nesimbi mabhizinesi, calcium carbide mabhizinesi, coking mabhizinesi uye zvichingodaro. Parizvino, iyo purofiti pamatani yetime yakawedzera kupfuura purofiti yematani esimbi, matani esimbi, matani ecalcium carbide, matani ekokoni. Mabhizimusi akashandisa zvemazuva ano lime kiln tekinoroji akabatsirwa zvikuru, uye akawana budiriro yemagariro. Nekudaro, mazhinji mabhizinesi anorambidzwa neyechinyakare manejimendi kuziva uye manejimendi danho uye haisati yagadzira yazvino lime lime kiln yekugadzira tekinoroji ichiri kuvimba neivhu yehuni kilimu kugadzirwa. Naizvozvo, kana isu tichida kudzora zvakakwana kusvibiswa kwevhu revhu, isu zvakare tinofanirwa kuvimba nekumisikidzwa kwazvino lime kiln kugadzirisa dambudziko rekudiwa.
Iyo inonzi yazvino nyowani tekinoroji lime kiln ndeimwe yesainzi calcining lime maitiro pamwe nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, simba rekuchengetedza basa, michina uye otomatiki. Nekuti maitiro aya anotora yazvino kukarukuta kupisa kwemafuta, inogona kushandisa izere simba, kunyanya gasi rinosvibisa nharaunda sosi yesimba uye rinoshandura marara kuita pfuma. Izvi hazvingochengetedze nharaunda chete, asi zvakare zvinogadzira mhando yakanaka uye yakaderera mutengo lime. Yayo yakananga uye isina kunangana mabhenefiti, hupfumi uye zvemagariro mabhenefiti anonyanya kutaridzika. Uku ndiko kukosha kwekusimudzira nyowani tekinoroji lime kiln.
2. Mhando dzemazuva ano dzekiriniki tekinoroji
Iko kune akasanganiswa makirni nemafuta, ndokuti, mafuta akasimba, coke, coke poda, marasha uye gasi chemoto. Gesi chemoto inosanganisira blast yevira gasi, coke hovhoni gasi, calcium carbide muswe gasi, gasi remoto, gasi rechisikigo zvichingodaro. Zvinoenderana nechimiro chehekeni, pane shaft kiln, jira rinotenderera, chirauro chemaoko, Vimast kiln (West Germany), Melz kiln (Switzerland), Fucas kiln (Italy) zvichingodaro. Panguva imwecheteyo, pane yakanaka yekumanikidza yekushandisa kiln uye isina kunaka kumanikidza mashandiro. Iyo yemazuva ano yakavhenganiswa huni ine 800 cubic metres pazuva inoburitsa pazasi pe500 uye yazvino girazi huni ine 250 cubic metres, kunyanya simba rekuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza lime kiln ine blast yevira gasi uye coke ovhoni gasi kupisa mwoto, zvakagadzirwa uye zvakagadzirwa. Dhizaini uye kugadzirwa kwe "lime kiln refu murazvo unopisa" yagadzirisa dambudziko rinopisa remhando yepamusoro yekoriori uye murazvo mupfupi wecoke ovhisi gasi, iyo inogona kushandisa izere neakasara coke ovhoni gasi. Kubva kune yekutanga coke hovhoni gasi "mwenje", inosvibisa nharaunda mune inokosha simba kune mabhizinesi ekugadzira mabhenefiti. Kune madiki uye epakati-saizi simbi nesimbi mabhizinesi, coking mabhizinesi, calcium carbide mabhizinesi, uye refractory indasitiri yakanaka kwazvo simba kuchengetedza, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, kugona uye nzira dzinoshanda.
3.ZVIREVO ZVINOKOSHA NEZVINODZIDZISWA
Chinhu chikuru cheremestone i calcium carbonate, nepo chikamu chikuru cherimu chiri calcium oxide. Iwo musimboti wekutsva lime ndeye kuora calcium carbonate mu limestone kuita inokurumidza nguva ye calcium oxide uye carbon dioxide nerubatsiro rwekupisa kwakanyanya. Maitiro ayo maitiro ndeaya
Maitiro acho ndeekuti limestone uye mafuta anopisirwa moto muime kilns (kana gasi mafuta mapaipi uye zvinopisa zvichidyiswa) uye zvinodzikiswa pamadhigirii mazana masere nemakumi mashanu, zvakaverengerwa pamadhigirii mazana maviri nemaviri, zvobva zvadzikiswa uye kuburitswa mumoto. Maitiro azere ekuverenga akaenzana nekuitiswa mumudziyo wakavharwa. Maumbirwo emoto akasiyana ane preheating, calcination, kutonhora uye nzira dzekudzikisa madota. Zvisinei, mamwe maitiro enzira akafanana: tembiricha yekukora ndeye 850-1200 madigiri, kudziya kwekutanga kuri 100---850 degrees. Iyo tembiricha yedota iri pazasi pe100 degrees. Iyo mbishi yezvinhu zvemhando yepamusoro, iyoimu yemhando yakanaka; iyo mafuta calorific kukosha yakakwira, huwandu hwekushandisa idiki; saizi rerombo rematombo rakaenzana nenguva yekuverenga; iyo yekukurumidza chiitiko chiitiko dhigirii inopindirana zvakaenzana nenguva yekuverenga uye iyo tembiricha tembiricha.
Pashure: Judha anodziya- mazana matatu / zuva X4 Lime kilns muLuoyang, Henan Province-EPC chirongwa
Zvadaro: Lime Kiln Kugadzira Line Gungano
Karusiyamu Hydroxide Equipment, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira Line Equipment, Kugadzira Calcium Hydroxide, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira, Karusiyamu oxide Uye Calcium Hydroxide, Zita Rekutengesa ReCalcium oxide,